Bit By Bit - Kugadzira kubatana kukuru - 5.5.2 zvireruke heterogeneity
Kana waita kuti vanhu vazhinji vashandise pane chinetso chesayenzi chaiye, uchaona kuti vatori vechikamu venyu vachave vasina hanya nenzira mbiri: vanozosiyana vari vaviri muunyanzvi hwavo uye nehutano hwavo. Nzira yekutanga yevamwe vanotsvakurudza vezvemagariro evanhu ndeyekurwisana nehutano hwakanaka kuburikidza nekuedza kusabvisa vatambi vechidiki uye vanoedza kuunganidza huwandu hwehuwandu hwehuwandu hwevanhu vose vakasara. Iyi ndiyo nzira isiri iyo yekugadzira basa rekubatana pamwe chete. Panzvimbo yekurwisana huterogeneity, iwe unofanirwa kuiridzira.
Chokutanga, hapana chikonzero chekusiya vatori vechidiki vasina ruzivo. Mukudanidzira pachena, vatori vechidiki vashoma vanokonzera pasina matambudziko; zvipo zvavo hazvikuvadzi ani zvake uye hazvidi nguva chero ipi zvayo kuongorora. Mukuverenga kwevanhu uye kuparadzira dhijekiti yekuunganidza, zvakare, iyo nzira yakanakisisa yekutonga kwehutano inouya kuburikidza ne redundancy, kwete kuburikidza nepamusoro wekutora chikamu. Zvechokwadi, pane kungosiya vadzidzisi vane ruzivo rwakanyanya, nzira iri nani ndeyokuvabatsira kuti vaite zvipo zviri nani, sezvakaitwa nevatsvakurudzi veBird.
Chechipiri, hapana chikonzero chekuunganidza mari yakatarwa yemashoko kubva kune mumwe mugove. Kubatanidzwa mumishonga yakawanda yekubatanidza yakawanda kunoshamisa zvikuru (Sauermann and Franzoni 2015) , neine nhamba shomanana yevanhu vachipa zvakawanda-dzimwe nguva kunonzi mafuta- uye vanhu vakawanda vanopa zvishoma-dzimwe nguva zvinonzi muswe mirefu . Kana iwe usingakwanisi kutora mashoko kubva kumusoro wemafuta uye muswe mirefu, iwe uri kusiya mashoma emashoko asina kufanirwa. Somuenzaniso, kana Wikipedia yakagamuchira 10 uye 10 chete (Salganik and Levy 2015) , inogona kurasikirwa ne 95% yezvigadziro (Salganik and Levy 2015) . Nokudaro, nemishonga yakawanda yekubatana, zvakanakisisa kuwedzera huterogeneity panzvimbo yekuedza kuibvisa.